Ulwandle Olunamandla i-Aísa. Ingxoxo nombhali we-Who Has Seen Mermaid? | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 19/08/2021 12:00 | Kubuyekezwe ku- 19/08/2021 22:52 | Izingxoxo, Abalobi, Amabhuku
Izithombe: ngezilokotho zikaMar Aísa Poderoso.
Ulwandle Olunamandla i-Aísa Uvela eZaragoza, uprofesa oneziqu ze-History kanye nezombhali. Inoveli yakhe yakamuva uthi ¿Ubani oke wabona intombi yasolwandle? Kulokhu ingxoxo Usitshela ngaye, ngomsebenzi wakhe, ngezinto azithandayo nangamaphrojekthi. Ngibona kakhulu ngenxa yomusa wakho nesikhathi sakho.
UMar Aísa Poderoso - Ingxoxo
INCWADI NAMUHLA: Inoveli yakho entsha inesihloko esithi ¿Ubani oke wabona intombi yasolwandle? Usitshelani ngakho futhi umqondo wavelaphi?
ULWANDLE OLUNAMANDLA AÍSA: Kuyicala lesibili labazalwane baseCárdenas, elingafundwa ngokuzimela kwelokuqala, UDostoevsky otshanini. Amanoveli wobugebengu noir, asethwe ikakhulu eLogroño, idolobha engihlale kulo iminyaka engamashumi amabili nesithupha, futhi ngilingisa UDiego Cárdenas, iphini lomhloli wamaphoyisa nodadewabo, uLucía, umhumushi. Laba bobabili basesikhathini esinzima, abadumazekile ngempilo. Ukusekelwa kwabo kanye nokubambisana kwabo ekuxazululeni amacala kuzobaholela ekutheni bazithole, kancane kancane.
Kukhona futhi ama-microcosms ahlukene ane- abalingiswa besibili abazuze uthando lwabafundi njengomphenyi wecala, amaphoyisa akanye noDiego, noma abakwaLucía enkampanini yokuhumusha. Ngaqala ukubhala leli cala lesibili, ngisho nangaphambi kokushicilela inoveli yokuqala, ngoba nganginesiqiniseko sokuthi laba balingisi babenohambo oluthe xaxa; Mina bengifuna ukwazi ukuthi bazothatha ziphi izinkomba.
Ukuqala kwamanoveli ami kuvame ukuza kimi nesithombe, isibani. Kulokhu kwakungokwesikhashana esasisencwadini yamaGothic yaseSan Bartolomé, isonto elihle elisenkabeni yeLogroño. Khona lapho inoveli iyaqala. Ubhekane nenselelo yokugcina umongo wokuqala, kepha ukuwunika okusha.
Kulokhu, uDiego ubhekene nokuvela kombhangqwana oshonile ekhaya lakhe, kulokho okubonakala kuyicala elicacile lodlame lobulili. Ukutholakala kwezincwadi ezithile ezindala ezifihlwe etafuleni lokugqoka, kanye ne-ajenda lapho kuvela khona amanye ama-aphoyintimenti angajwayelekile anenhlanhla, kuzoholela ekuphendukeni kophenyo. Izilungiselelo zenoveli nazo zisisa ezindaweni ezifana EParis noma eZaragoza, idolobha langakithi, lapho kwenzeka khona isimo njalo.
Abafundi sebevele bangithumela imibono yabo; Bayayithanda futhi bayakwazisa ukulinganisela phakathi kwesakhiwo esivusa amadlingozi, abalingiswa abazizwa bekhululekile ngabo futhi abafuna ukuhlangana nabo, umoya kanye nemizwa. Kubukeka kubalulekile kimi ukuthi, ngaphezu kwesakhiwo, umfundi anganambitha futhi athole ezinye izici eziqhubeka nokuzwakala lapho seziqediwe. Okunye ukungafani yi izinkomba zobuciko, umlando noma i-cinema yakudala, ishumekwe endabeni uqobo lwayo.
Ngiyathanda ukuthi bangitshele ukuthi bafuna ukuyiqeda ukuze bathole imfihlakalo, kodwa ukuthi, ngasikhathi sinye, bayabadabukela ngoba bazizwa bekhululekile ngaphakathi kule noveli. Ngeke ngidalule okuningi, kungcono ukuthi abafundi ngokwabo bazitholele ngokwabo.
IMAP: Ngibhala ngoba ngingumfundi. Umfundi obefunda futhi ekujabulela kakhulu ukufunda kusukela esemncane. Ngaphambi kokufunda ukufunda, ngikhumbula izindaba ugogo angitshela zona ngaphambi kokulala. Ngemuva kwalokho kwafika i- Izindaba zokusika zikaFerrándiz. Kamuva Enid Blyton, UVictoria Holt… Futhi, ekugcineni, gxumela emakhulwini ezincwadi ubaba ayenazo esitolo sezincwadi. Akungabazeki, Agatha Christie Kwaba ukutholakala okukhulu. Kamuva kwafika abanye ababhali abanjengo UPearl S. Buck, uLeon Uris, uMika Waltari, Colette, njll. Kusukela ekuseni kakhulu ngangijwayele ukuhamba nobaba njalo ngoLwesihlanu siye esitolo sezincwadi ngithenge izincwadi ezimbili zesonto. Ngakho-ke nami ngaqala ukuzenzela owami umtapo wezincwadi. Ngiyikhumbula njengenjabulo emsulwa.
Ngabhala indaba yami yokuqala ngineminyaka eyisikhombisa, kweyesibili ye-EGB. Ngiyakhumbula ngoba leyo nkambo uthisha wami wanginika ukuthi ngifunde ekhaya ikhophi yakhe ye- Inkosana encane; Ngazizwa ngiyintombazane ejabule kakhulu emhlabeni. Lokhu kungikhuthazile ukuthi ngibhale ezami izindaba encwadini ebhalwe ngumama ngephepha eliluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngesikhathi ubusha, kwamanye amakilasi okwakunzima kuwo ukunaka, wabhala Izindaba zothando kubangane bami, ababekwe ezweni abalikhethile, okunye kwakusekucabangeni kwami. Kuyathakazelisa ukuthi wuhlobo engingakaze ngiluthinte futhi.
Buyela emuva 2001 Nginqume ukubhala inoveli yami yokuqala. Ngokuqeqeshwa kwami ​​kwe BA emlandweni Ngakhangwa yi uhlobo lomlando. Ngamhambisa kumklomelo ohlonishwayo, engingazange ngiwunqobe. Kodwa-ke, ngilujabulele kakhulu lolo hambo lokuya eMadrid ukuhambisa lo mbhalo ngesandla kumshicileli uqobo. Kwakungokuhlangenwe nakho okujabulisa kakhulu futhi okungenakulibaleka.
IMAP: Angikwazanga ukukhetha eyodwa; Ngijabulele ababhali abaningi, abanezincwadi zabo engizifunde ezigabeni nangezikhathi ezahlukene empilweni yami.
Ngiyazithanda izincwadi ze-XIX nengxenye yokuqala ye-XX: UJane U-Austen, the UBrönte, UFlaubert, Stendhal, Balzac, Oscar Wilde, Tolstoy, UDostoevsky, Emilia UPardo Bazán, Clarín, UWilkie Collins, Edith I-Wharton, UScott Fitzgerald, Forster, Evelyn Waugh, Agatha Christie noma UNémirovsky.
Ngokusondela ngesikhathi, ngingasho ezinye eziningi: U-Isabel Allende, uCarmen Martín Gaite, uPaul Auster, uDonna Leon, uPierre Lemaitre, uFred Vargas nabanye abaningi. Zonke zinokufana okufanayo okungenze ukuthi ngijabulele, zibonise noma zingishukumisile. Ngamunye wabo ushiye uphawu kimi; Ngifunde kubo bonke. Ekugcineni, isitayela sombhali sakhiwa ngobuntu bakhe, okuhlangenwe nakho futhi, nakanjani, ukufundwa.
IMAP: Ngizokhetha ezimbili: U-Ana Karenina, lapho ezoba nengxoxo ngempilo nothando. Ngingathanda ukuhamba naye emigwaqweni yaseSt. Petersburg, yize ngicabanga ukuthi ngemuva kokuphuza itiye, uTolstoy omkhulu kungenzeka ukuthi wacasula ukuphela.
Omunye umlingiswa engingathanda ukujabulela naye kusihlwa unabo abakhulu UGatsby. Angikuthandi ukuvakashela iNew York enkampanini yakho. Kubonakala kimi abalingiswa abathandekayo, abagcwele izibani nezithunzi, ama-nooks nama-crannies, ama-nuances.
IMAP: Ngiyayithanda, uma kungenzeka, bhala wedwa uthule, kodwa ngiyazivumelanisa nezimo. Njengendatshana ngizokutshela lokho Ubani oke wabona intombi yasolwandle? Ngayiqedela eZaragoza, ngihleli kusofa, ngiboshwe ngemuva kukamatilasi egumbini eligcwele abantu, ngenkathi umyeni wami nezingane bependa behlanganisa ifenisha. Kwesinye isikhathi awukwazi ukukhetha.
Ukuze ngifunde ngidinga incwadi enhle kuphela, okusele akunandaba nami.
IMAP: Kunezindawo lapho ngigxila khona kangcono. Endlini yami I-Logroño Nginokuncane ideskithophu phambi kwewindi lapho ngibona khona izihlahla zintengantenga futhi abantu beza badlule; Yindawo enginikeza ukuthula nalapho nginethezekile khona. Ku- ehlobo, Ngikuthanda kakhulu ukubhala endlini yami eMedrano lapho nginezinto ezinhle khona I-Mountain View. Lapho ngaqala Ubani oke wabona intombi yasolwandle? Nokho,, UDostoevsky otshanini Kwavela ngesikhathi seholide eVinarós. I- um kuyakhuthaza kakhulu.
Mayelana nesikhathi sosuku, ngincamela ukubhala ku- ekuseni kakhulu, lapho wonke umuntu usalele nendlu ithule du. Esinye isikhathi engivame ukusizakala ngaso emini. Ungalokothi ebusuku, khona-ke ngincamela i-leer. Ngokwami, ukufunda kuyangondla ukuze ngiqhubeke nokubhala. Kuyisenzo sansuku zonke.
Ngiwuthisha futhi kufanele ngivumelanise umsebenzi wami nempilo yami yomndeni, kodwa Ngizama ukubhala nsuku zonke, noma ngabe kungamagama ambalwa nje. Ngiyakholelwa, ngaphandle kokungabaza, ukuthi ungahlala wenza isikhathi salokho okukhathalelayo futhi okuthandayo.
IMAP: Njengomfundi ngiyayithanda i- ukulandisa futhi ngijabulela ne- inoveli yomlando. Angikuvimbi ukuthi ngiziqalele usuku olulodwa njengombhali ngalezi zinhlobo.
IMAP:Ngiyafunda Imvelo, ngu-Ashley Audrain. Kuyinoveli ethokozisayo, eyangempela kakhulu. Umdlandla wengqondo okhuluma ngokuba ngumama futhi ovusa usinga, awushiyi ungenandaba. Ngokombono wokulandisa, ukusetshenziswa komlandisi kumuntu wokuqala nowesibili kuyathakazelisa kakhulu, kanye nesikhathi esigxumayo. Ngiyayincoma, ngaphandle kokungabaza.
Nginecala lesithathu labazalwane bakwaCardenas, etholakala entwasahlobo. UDostoevsky otshanini eba ekwindla futhi Ubani oke wabona intombi yasolwandle? ebusika. Kodwa-ke, nginemibono emisha ekhanyayo ekhanda lami. Kumlobi kukhona umzuzu othokozisayo: lapho ucabanga ukuthi ungasondela endabeni emnandi.
IMAP: Akungabazeki ukuthi i- isilinganiso sokushicilelwa es okuqondile. Kunamaqembu ambalwa wokushicilela anamandla aphethe imakethe kanye nenqwaba yabashicileli abancane naphakathi okufanele bancintisane nekhwalithi noma ngesiphakamiso esithile. Kodwa-ke, kuyiqiniso ukuthi kunezindlela ezehlukene umbhali ongaziwa angafinyelela ngazo ekushicilelweni kwezincwadi zakhe. Akukaze kube namathuba namathuba amaningi njengamanje. Ngemuva kokushicilelwa, kuqala uhambo lapho umbhali kufanele abandakanyeke ekhulwini elilodwa. Ngaphandle kokungabaza, amanethiwekhi wokuxhumana nomphakathi ayimbumba ebalulekile yokuzenza waziwe futhi uthuthukise izincwadi zakho. Sonke siyazi ukuthi akulula nokuthi okunikezwayo kukhulu, kepha kimi, wonke umfundi ofaka isikhathi nemali yakhe encwadini yakho umklomelo omuhle Lokho kungaphezulu kokunxephezela umzamo otshaliwe.
Enhliziyweni yami iphupho lami bekuwukushicilela, kusobala. Umbhali ubhala ngoba uyayijabulela, ngoba uyawuthanda lowo mzuzu wokuhlala phansi ukwakha abalingiswa nezindaba, ngoba uyakudinga njengokuphefumula. Kepha, ngaphezu kwakho konke, bhala ukuze bakufunde, ukuze nabanye bazithokozele izindaba zabo.
Kuyiqiniso ukuthi ukushicilela kwakubonakala kungafinyeleleki kimi. Isikhathi eside ngizinikele ekubhaleni ngendlela eyimfihlo kakhulu, umyeni wami kuphela owayazi. Ungumfundi wami wokuqala, ugxeka kakhulu ngendlela enhle, yingakho ngithemba isinqumo sakhe. Kwesinye isikhathi, kufanele kwenzeke okuthile okukucindezela ukuthatha isinyathelo sokuqala. Mina, kwaba ukulahlekelwa ngabathandekayo ababili ngesikhathi esifushane kakhulu. Ngaleso sikhathi ngangazi kahle ukuthi kunephuzu empilweni elingenakubuyiswa. Lapho yonke into iphela, uthatha kuphela lokho obukuphile, okujabulele, okuthandayo. Ngangicabanga ukuthi angifuni ukuzisola lapho sekwephuze kakhulu nokuthi akukho engingakulahla ngokuzama.
Kuyiqiniso lokho kunabantu abaningi ababhalayo futhi abafuna ukushicilela, kufanele sibe namaqiniso. Wumjaho webanga elide lapho kufanele uthathe izinyathelo, uphikelele futhi usebenze ngokuzimisela Phezu kwakho.
IMAP: Sisesikhathini esiyinkimbinkimbi, bengingasho lokho ekushintsheni kwesikhathi. Njengesazi-mlando ngiyazi ukuthi izinkinga zenzeka, noma ngabe kunzima kakhulu ngenkathi usaziphilela, futhi emuva kwalokho izikhathi ezingcono zihlala zifika. Okungenani, ngifisela izizukulwane ezintsha. Mayelana nezincwadi, ubuciko noma umculo, mhlawumbe imisebenzi ebabazekayo ivele ezikhathini ezimnyama kakhulu. Isiko lilula, lihlala lisindisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » Ulwandle Olunamandla i-Aísa. Ingxoxo nombhali we-Who Has Seen Mermaid?